मलेशियन सरकारको निर्णय, सबै क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मलेशियन सरकारको निर्णय, सबै क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने !
को’रोना भाइ’रस संक्र’मण विश्वव्यापीरुपमा फै’लिएपछि मलेसियाले सन् २०२० मार्च १८ देखि विदेशी कामदार भर्ना गर्न रोकेको थियो । मलेसियाले करिब दुई वर्षपछि विदेशी कामदारका लागि ढोका खोलेको हो ।
मलेसियाले यसअघि पहिलो चरणमा प्ला’न्टेशन भनिने रवर र पाम उद्योगमा मात्रै नयाँ विदेशी कामदार लैजान पाउने नीति लिएको थियो । शुक्रबार भएको नयाँ निर्णय अनुसार उत्पादन, सेवा क्षेत्र, कृषि, प्लान्टे’शन र घरेलु कामदारको नयाँ भर्ना खुलाएको हो ।
नेपाली दूतावास मलिसियाका काउ’न्सिलर श्रम दिपक ढकालले नयाँ कामदारको एप्रु’भल खुलेको विस्तृत जानकारी आउन नसकेको भन्दै मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर खुला गर्ने निर्णय भएको विभिन्न स्रोतबाट जानकारी आएको बताए ।
मलेसियाले शुक्रबार बंगलादेशसँग प्लान्टे’शनसहित सबै क्षेत्रमा कामदार लिने सम्झौता गरेको बताइएको छ । नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार नेपालबाट कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क, दुईतर्फी हवाई टिकट,
भिसा तथा स्वास्थ्य परी’क्षण शुल्क खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने प्रावधान छ । सम्झौतामा कामदार पठाउने नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाका रोजगारदाताले सेवा शुल्क वापत कामदारले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत रकम सेवा शुल्क दिनु पर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त नेपालमा हुने स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचको खर्च रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मलेसियाले शुक्रबारदेखि ई–भिसा अनलाइन प्रणालीको शुरूवात गरेको छ । त्यसले तत्कालका लागि मलेसिया जाने विदेशी पर्यटक, विदेशी विद्यार्थी,
विदेशी व्यापारी र स्वास्थ्य उप’चारका लागि जाने बिरा’मीका लागि सजिलो हुने र केही समयपछि विदेशी कामदार लैजान पनि उक्त प्रणालीले सहयोग पु¥र्‍याउने मलेसियाको अध्यागमनका महानिर्देशक दातुक इन्देरा खैरुल जैमी दाउदले बताएका छन् । मध्यान्ह दैनिकमा खबर छ।